Ukuxilongwa kweVerb verb for "Briller" (ukukhanya
Uza "Shanyisa" ekudibaniseni isenzi sesiFrentshi "uBhanya"
"Ukukhanya" ngesiFrentshi sisenzi isenzi. Kulula ukuba ukhumbule ukuba udibanisa ngokucokisekileyo, njengokuba "kukunika ukhanyisa ngokukhawuleza."
Xa ufuna ukwenza utshintsho kwixesha elidlulileyo-okanye elikhoyo okanye elizayo, ngenxa yolu hlobo-kuya kufuneka udibanise isenzi . Abafundi baseFrentshi abaye bafunda ezinye izenzi eziphelile kuzo ziya kufumana esi sifundo.
Ukudibanisa i-Verb Briller yesiFrentshi
Okokuqala, ukuhlaziywa okukhawulezayo kokubhaliweyo.
Gcina ukhumbule ukuba i-'LL 'ephindwe kabini ifana' Y ' xa ilandela' I ' Kunokuba kunzima 'isandi sobhenqo ], kubizwa [ breeyer ]. Oku kulandelelanisa kuzo zonke izenzi-magama.
I-Briller is a regular -ER verb kwaye yenza ukuba kube ngokuthe ngqo. Isiphelo sesenzi esithatha indawo silandela iphethini ethile. Ngokomzekelo, kwixesha elizayo, i-yongezwa ukuba ibhenkce kwaye kwimixesha engadluliyo idlulileyo, i- becomes-ais .
Uza kufumana oku kwiizenzi ezifanayo njengomsizi (ukulimaza) kunye ne- augmenter (ukuphakamisa) . Oko kwenza isenzi ngasinye sitsho lula ukufunda.
Ishati ibeka iifom zokuqala zokubhenela ukuba ufunde. Ukuze uyisebenzise, ​​jongana nesibhengezo sesifundo ngexesha elifanelekileyo. Ngokomzekelo, "Ndiya kukhanya" "Ndiya kukhanya" kwaye "siya kukhanyela" ngu " sisi brillerons ."
bhanya brillerai brillais
iimboli izibhakabhaka brillais
bhanya bhinqa brillait
iibhokhwe iibhondi bulumko
brillez brillerez brilliez
bhinqa i-brilleront bhanya
Ukubamba iqhaza kweBlower
Xa ufuna ukuyisebenzisa inxaxheba yenkcazo ye- briller , yilahla uze udibanise . Oku kukunika igama elihle . Ngaba uqaphele ukuba kufana "nokuqhayisa"? Okwangoku ihamba inxaxheba apho sifumana ukulungelelaniswa okunokukunceda ngokukhunjulwa.
Enye Ixesha elidlulileyo lokuBhanya
Ixesha elidlulileyo le- briller lingabonakalisa ukusebenzisa ukungapheleli okanye i- compé compé .
Kulo hlobo lokugqibela, uya kusebenzisa i- pastoral brillé kunye ne-conjugate ye- poss , into encedisayo .
Njengomzekelo we-comped passé, " ndifudumbile " kuba " je brillé " kwaye " sithutha " "siye sagubha ." Qaphela indlela i- ai kunye ne-conjugates ye- poss kunye ne- brillé ayitshintshi ngento.
Ukugqithisa okulula ngakumbi kweBriller
Kukho amaxesha eFrentshi yakho ukuba uya kusebenzisa enye yeefom zezenzi ezilandelayo. Ukuzithoba kunye neemeko zisetyenziswe xa isenzo sinokungaqiniseki kuso. Ukugqithisa okulula nokungafezeki kubonakala ngokubanzi kwiincwadi kunye xa ubhala.
bhanya i-brillera brillai brillasse
iimboli i-brillera brillas bhanya
bhanya i-brillerait bhanya bhinqa
bulumko iibhondi i-brillâmes brillassions
brilliez bhanya brillâtes brillassiez
bhinqa bhinqa bhinqa bhanya
Xa ufuna ukusebenzisa i- briller ngemiyalelo emifutshane okanye izicelo, unokujika kwisimo sesenzi esicwangcisiweyo. Ngaloo, phawula isichazi sesifundo uze uthethe isenzi kuphela: " khanyisa " kunokuba " ukhangele ."
Umzekelo Weeterm ye-Verb Go
Iintlobo ezili-18 zeetenzi zesiSpanish
Indlela yokudibanisa igama lesiJamani elithi Finden
I-Moper Impact in Italian
Indlela yokudibanisa 'i-Chercher' (ukujonga)
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi "utshabalala"
Malunga ne-Swiss Architect uPeter Zumthor
I-Christmas Brainstorm Activity
Ngaba i-Ford Stop Yenza ntoni i-5.0L Mustang?
Iintsuku zoLwazi lweSithathu
Zingaphi Iimvoti Zomthetho Ngaba Umviwa Ufuna Ukuwina?
Biography kaHerbert Spencer
Iimvumi ze-Rock Classic
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseAnzio
Imfazwe yaseKorea: USS Antietam (iCV-36)
Ukunqula Inkolo Ekhohlakeleyo kunye namanye amaDombo kwiHholide lakho Uluhlu lwengoma
Uqoqosho kunye noRhwebo lweMaya yamandulo
Uhlobo lweNgcaciso lweNkcazo zeNkqubo
Umbuzo Oyingqungquthela Ubuxoki
I-Antireligion kunye neeNtshukumo zeNqulo
Iingoma ezi-10 eziphezulu kakhulu ze-Doo-Wop zexesha lonke